#SayNOto66d: Mandrakitra Ny Fitomboan’ny Tranga Fanalam-baraka Antserasera Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2018 4:28 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Español, Italiano, English
Vondrona mpanandra-teny maromaro any Myanmar no nanangana tranonkala ahitana vaovao momba ny tranganà fanalam-baraka an-tserasera nandritra ny dimy taona farany, izay tafiditra amin'ny hetsika mitaky ny fanafoanana ny andininy faha-66 (d) ao amin'ny Lalàna mifehy ny Fifandraisan-davitra izay manameloka ny fanalam-baraka an-tserasera.
Natomboka sy novolavolain'ny Phandeeyar fihaonan-dalan'ny teknolojia ao an-toerana ny tranonkala # SayNOto66d. Aingam-panahy avy amin'ny asan'ny Hetsika ho Fanavaozana ny Lalànan'ny Fifandraisandavitra sy ny Fanafoanana ny And.66D izany, fiaraha-mientana ahitana fikambanana fiarahamonina sivily miisa 22.
Manasongadina fikarohana nataon'ny Free Expression Myanmar izay nanara-maso ireo tranga 66 (d) teo anelanelan'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2017 izany.
Niteraka adihevitra hatramin'ny taona 2013 Ny andininy faha-66 satria nampiasain'ny manampahefana indrindra mba handrahonana ireo mpitsikera sy ny mpanao gazety. Nohararaotina ny fanjavozavon'ny fepetra sy ny sazy henjana mba hampangina ny olom-pirenena tsotra. Ity ny lahatsoratra ao amin'ny andininy faha-66 (d):
Nampitandrina ny Free Expression Myanmar fa tsy hanakana ny fitomboan'ny tranga fanalam-baraka ny fanitsiana:
Nandiso fanantenana ireo mpikatroka marobe ao anatiny sy ivelan'i Myanmar izany satria anisan'ny hetsika mpomba ny demaokrasia izay nanohitra ny fitondrana miaramila nandritra ny taona maro ny NLD. Raha tokony hanova na hanafoana ny lalàna manafay nataon'ny fitondrana miaramila, mamela ireo manampahefana miaramila, mpanao politika, sy olona matanjaka hafa mba hampiasa ny lalàna toy ny 66 (d) ny governemanta tarihin'ny NLD mba hanenjehana sy hanorisorenana ireo mpitsikera azy.
Ankoatra ny fanomezam-baovao ho an'ny vahoaka momba ny raharaha 66(d), miaro ny fanafoanana ny lalàna amin'ny alàlan'ny fanentanana ireo mpitsidika mba hanasonia fanangonan-tsonia an-tserasera, mandresy lahatra ny parlemanta, ary mitatitra momba ny raharaha 66 (d) izay mbola tsy ao anatin'ny lahtahiry ihany koa ny tranonkala.
Mandritra izany, nisarika ny sain'ny governemantan'i Myanmar momba ny anjara andraikitry ny 66 (d) amin'ny fanimbana ny fahalalahana miteny ao amin'ny firenena ny Filankevitry ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'olombelona.